Ayaan Xirsi oo hanjabaado cusub darteed uga laabatay go'aan ay qaadatay - Caasimada Online
Home Warar Ayaan Xirsi oo hanjabaado cusub darteed uga laabatay go’aan ay qaadatay
Ayaan Xirsi oo hanjabaado cusub darteed uga laabatay go’aan ay qaadatay
Muqdisho (Caasimada Online) – Warbaahinta Caalamka ayaa baahisay warar sheegaya in Ayaan Xirsi, oo ah gabar Soomaali ah oo horey diinta Islaamka u aflagaadeysay ay joojisay socdaal ay ku gaari laheyd dalalka Australia iyo New Zealand.
Warbaahinta ayaa sheegeysa in Ayaan Xirsi ay socdaalkaasi u baajisay sababo la xiriira dhinaca ammaankeeda.
Warbaahinta ayaa hakatka socdaalka Ayaan Xirsi kasoo xigatay Tv-ga dalka Australia oo ay ka shaacisay inay joojisay socdaalkii ay ku gaari laheyd dalalka Australia iyo New Zealand.
Ayaan Xirsi ayaa sheegtay inay heshay macluumaad ku aadan in loo qorsheeyay falal amni darro oo lala maagan yahay, hayeeshee ay dib uga laabatay go’aankeedii ahaa Safarka dalalka Australia iyo New Zealand.
Sababta ugu weyn oo Ayaan Xirsi ay u joojisay socdaalkeeda ayaa lagu sheegay inuu la xiriiro fariimo hanjabad ah oo loogu soo diray Emailka, Facebook iyo Telka gacanta oo ay heysato.
Sidoo kale, Ayaan Hirsi ayaa sanadadii lasoo dhaafay waxaa soo gaaraayay fariimo hanjabad ah oo loogu sheegaayo in la dili doono.
Geesta kale, Dowladaha Holland iyo Mareykanka ayaa horay u diiday inay bixiyaan dhaqaale gaar ah oo lagu ilaaliyo amniga Ayaan Xirsi.